♪ Video တည်းဖြတ်, စာတန်းထိုး, Photo Slideshow အကောင်းဆုံး ဖန်တီးနိုင်တဲ့ - VivaVideo Pro: Video Editor v4.6.0 Apk (March-6) ♫ ~ ဝင်းကမ္ဘာကျော်
♪ Video တည်းဖြတ်, စာတန်းထိုး, Photo Slideshow အကောင်းဆုံး ဖန်တီးနိုင်တဲ့ - VivaVideo Pro: Video Editor v4.6.0 Apk (March-6) ♫
Monday, March 13, 2017 Pyae Phyo (MMiTD) No comments
Video Edit ဖန်တီးလို့အကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့ VivaVideo Pro:Video Editor ကတော့ပုံစံအသစ်အနေနဲ့ ထွက်ရှိလာပါပြီဗျာ။ ဖုန်းနဲ့ Video Edit တာ ၀ါဒနာ ပါတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ အတွက် တကယ်ကိုအသုံးဝင်စေ ပါတယ်။ March-6 ရက်နေ့က Update ထွက်ထားတဲ့ v4.6.0 နောက်ဆုံး ထွက်ကို တင်ပေးလိုက်တာပါ။ Playstore မှာ $10.99 နဲ့ ၀ယ်ယူရပါတယ်။ အခု ကျနော့်ဆိုဒ်မှာ Free ဒေါင်း ယူနိုင်ပါပြီး။ VivaVideo Pro Video Editor ကို မသုံးဖူးတဲ့ သူတွေ အတွက် တင်ပေးလိုက်တာပါ။ ကျနော် ရှာထားတဲ့ တည်းဖြတ်, စာတန်းထိုး, Photo Sliteshow ဆော့ဝဲလ်တွေထဲမှာတော့ လက်ရှိဒီဆော့ဝဲလ်က တကယ်ကို အလန်းဆုံး ပဲဗျာ။ ဖုန်းတိုင်းမှာအဆင်ပြေလို့ တကယ်ကိုခိုက်သွားတယ်။
ဒီဆော့ဝဲလ် တခုလေးနဲ့ တော်တော်စုံစုံလင်လင် Video တွေ ဖန်တီး နိုင်တာမို့ လူတိုင်းဆောင်ထား သင့်ပါတယ်။ အသုံးပြုရတာလွယ်တာမို့ သုံးပြုနည်း မရေးပြတော့ဘူး။ အသေးစိတ်ကို Playstore မှာ ၀င်လေ့လာနိုင်ပါတယ်။ မူရင်းမှာ Built-in 60+ cool live video effects and more can be downloaded for FREE! တဲ့။ တကယ်စမ်းသုံးကြည့်ပြီးပါပြီး။
Android Version 4.0 အထက်မှာ အားလုံး အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ စိတ်ဝင်စားသူများ အောက်ကလင့်မှာ အမုန်းဒေါင်းနိုင်ပါပြီ။
- Unlimited video length in exporting
- HD quality export
#VivaVideo Key Features
- Exclusive selfie camera with seven fascinating lenses
- Use nine funny lenses to play your "prank skills"
- Capture videos especially for Instagram & Vine
- Enhance your videos with various texts, FX, stickers, music, filters, transitions and live dubbing.
- 200+ special effects including Animated Stickers/Themes/Filters/FX/Texts/Transitions
- Share your works to Facebook, YouTube, Instagram, WhatsApp, Facebook Messenger, Line, email and etc
Posted in: Video Editing
♪ ဆယ်သိန်း ခန့် ရှိနိုင်တဲ့ Samsung Galaxy S8 ဈေး...
♪ Galaxy S8 နဲ့ တခြားဖုန်းများ Specs နှိုင်းယှဉ်ချက...
♪ Samsung Galaxy S8 နဲ့ S8 Plus တို့ရဲ့ ကွဲပြားခြာ...
♪ Android မှာ Cursor ကို လွယ်ကူစွာ ချနည်း ♫
♪ " Amazon တွင် ဈေးသက်သာသောဖုန်းများကို ပိုမိုမြင...
♪ “Facebook Messenger မှာ တည်နေရာကို စဉ်ဆက်မပြတ် မ...
♪ “ZTE က Nubia M2 , M2 Lite နဲ့ N2 စမတ်ဖုန်းများကိ...
♪ “ZTE Blade V7 Lite” Price - 179,xxx Ks ♫
♪ “Meizu M5 Note” ၂၀၉,၀၀၀/- ကျပ် ♫
♪ ကျပျောက်သွားတဲ့ AirPods ကို ဘယ်လို ပြန်ရှာမလဲ ♫
♪ Android O ရဲ့ အကောင်းဆုံး feature (၉) မျိုး ♫
♪ Ooredoo ရဲ့ ဖုန်းဘီလ် ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်းအပိုငွေရရှ...
Internet Download Manager 6.28 Build 1 (Full Crack...
♪ " Teclast Tablet X80 Plus (Dual OS) " Price - 99...
♪ " နောက်ဆုံးရဈေးနှုန်းများ " (28.3.2017 ၊ အင်္ဂါနေ့...
♪ " Xiaomi Redmi Note4VS Xiaomi Mi 5c " ♫
♪ “မိုဘိုင်းဖုန်းမှတစ်ဆင့် အရောင်းအ၀ယ်ပြုလုပ်နိုင်...
♪ “လူသတ်သမားရဲ့ WhatsApp မှ Message များကို ဗြိတိန...
♪ “ဇွန်လမှာဝယ်ခွင့်ရတော့မယ့် မူလလက်ဟောင်း Nokia ” ...
♪ " Xiaomi Redmi Note 4X " Price : 212,000/- ♫
♪ " Viber ဖုန်းနံပါတ် (၃၅) ခုကနေလည်း ဆင်းကတ်များကိ...
♪ “Huawei မှ နွေဦးသင်္ကြန် ပရိုမိုးရှင်းပြုလုပ်” ♫
♪ “Samsung Galaxy A5(2017)” - Price 52x,xxx Ks ♫
♪ “Facebook က Comment များမှာ GIFs ကိုစမ်းသပ်နေ” ♫...
♪ “Facebook က စိတ်ဖြင့် ဆက်သွယ်နိုင်တဲ့ ကိရိယာကို ...
♪ “Asus Gaming Notebook PC G752 ကို ဝေဖန်သုံးသပ်ကြ...
♪ “BlackBerry Aurora” ♫
♪ “Apple က iPhone များ Hack ခံရမှုကို ငြင်းဆို” ♫
♪ " ကွန်ပျူတာကနေ Facebook Live လွှင့်နိုင်ပြီ " ♫
Internet Download Manager v6.28 Buid5Full Cracke...
♪ Android ဖုန်းကို ကွန်ပျူတာရဲ့ မိုက်ကရိုဖုန်းအဖြစ...
ဓာတ်ပုံကောင်းကောင်းလုပ်ချင်တဲ့ဘော်ဒါတို့ အတွက် - A...
♪ MPT ၏ ကျပ် ခုနစ်သောင်းဝန်းကျင်ခန့် 4G ဖုန်း ♫
♪ ကိုယ့် Facebook အကောင့် အဟက်ခံရတဲ့အခါ ဘာတွေလုပ်ရ...
♪ Shwe Daily English For Android ♫
♪ Android ဖုန်းရဲ့ Call logs, SMS တွေကို ဖုန်းတစ်လ...
♪ Facebook Messenger က Voice Message ကို Download ...
♪ Gmail ထဲက ဗီဒီယိုကို download လုပ်စရာမလိုဘဲ ကြည်...
♪ ဓာတ်ပုံတွေကို စနစ်တကျ စုစည်းထားဖို့အတွက် IPhone ...
♪ Instagram က ကိုယ့်ရဲ့ Live video ကို ဘယ်လို သိမ်...
Backup လုပ်နိုင်/ Restore လုပ်နိင်တဲ့ - SMS Backup...
♪ Facebook Live ကို ကွန်ပျူတာကနေ ဘယ်လို လွှင့်မလဲ ♫...
♪ OPPO F3 Plus - အားသာချက် ၊ အားနည်းချက် ၊ ဒီဇိုင်...
♪ ကွန်ဖူးဖိုက်တင်ချချင်သူများအတွက် - THE KING OF ...
♪ Facebook ပေါ်မှာ MeMeရုပ်ပြောင်ဟာသာလေးတွေဖန်တီးနိ...
♪ အင်တာနက် Bill သက်သာစေပြီး Data သုံးစွဲမှုလျှော့ချ...
♪ Android ဖုန်းတွေအတွက်နာမည်ကြီး Avria Antivirus ထ...
♪ ဖုန်းထဲမှ Photo , Viedo , App နှင့်အခြား Data မျ...
♪ ဒီဇိုင်းလန်းတဲ့ Icon လေးများ - Miu - MIUI 8 Styl...
♪ နာမည်ကြီးနေတဲ့ Mario Gmae Android ဖုန်းမှာကစားနိ...
♪ ဖုန်းထဲမှာတင် ဂစ်တာတီးပြီးသီချင်းဆိုနိုင်တဲ့ - U...
ဖုန်းရဲ့ Memory RAM ကိုစိတ်တိုင်းကျ Manages လုပ်ပေ...
♪ ၂၀၁၇ ခုနှစ်ရဲ့ အကောင်းဆုံး အခမဲ့ Antivirus များ ...
♪ Group Selfie ကို တစ်ခေတ်ဆန်းစေမည့် OPPO ၏ F3 Plu...
♪ " Apple မှ 9.7” iPad အသစ်အား ကြေညာခဲ့ " ♫
♪ " ZTE မှ nubia M2, M2 Lite နှင့် N2 တို့အား ပြ...
♪ " Xiaomi Mi Mix2၏ နမူနာပုံစံပေါက်ကြားခဲ့ " ♫
♪ " နောက်ဆုံးရဈေးနှုန်းများ" (24.3.2017၊ သောကြာနေ့...
♪ " Viber out call ၀န်ဆောင်မှုအား 1 Stop ဆိုင်များတ...
♪ “Nokia : Smartphones for Life” ♫
♪ “KENBO E91” Price 79,800 Ks ♫
♪ Android အတွက် အကောင်းဆုံး Music Streaming Apps မ...
ALL latest Model 2017 Frp Tool
♪ ရှေးခေတ်စတိုင် iPhone 7+ ကို ၂၆ သိန်း နဲ့ ၀ယ်ယူန...
♪ Android မှာ Private Browsing ကို အသုံးပြုနည်း ♫
♪ Facebook မှာ Live လွှင့်သွားတဲ့ အုပ်စုဖွဲ့ အဓမ္မပြ...
♪ အကောင်းဆုံး ကင်မရာများ တပ်ဆင်ထားတဲ့ Android Phon...
Android OS application များကို full version ဖြစ်အေ...
♪ " Xiaomi Mi Note2" Price » 685,000 Ks ( 128GB ...
♪ " Huawei က P10 Lite ကို မိတ်ဆက် " ♫
♪ “Samsung Galaxy S8 တွင် မျက်နှာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာတဲ...
♪ Android O ရဲ့ အကောင်းဆုံး စွမ်းဆောင်ချက်များ ♫
♪ ရွှေ ၂၄ ကာရက် ထည့်သွင်းထားတဲ့ HTC One M7 ♫
TTA FRP HELP APK
♪ ဘယ်သူမှ မ၀ယ်ချင်တဲ့ သိန်း ၂၂၀ တန် မိုဘိုင်းဖုန်း...
♪ ဟက်ကာများရဲ့ ငွေညှစ်ခံနေရတဲ့ Apple ♫
♪ အင်တာနက်ပေါ် သုံးစွဲသူများ အပျင်းပြေစေမယ့် ဝက်ဘ်ဆ...
♪ A Better Camera Unlocked ♫
♪ ကျောဘက် ကင်မရာနှစ်ခုပါတဲ့ nubia M2 အပါအဝင် စမတ်ဖ...
♪ အမြန်ဆုံးအင်တာနက် ကွန်ရက်ဆု MPT သတ်မှတ်ခံရဟုဆို ...
♪ " ကွန်ပျူတာကိုယ်တိုင်တည်ဆောက်ယူနိုင်မည့် PC Buil...
♪ “Samsung Galaxy J2 Prime” Price - 169,000 Ks ♫
♪ “Asus Zenfone3Max” ♫
♪ Apple က ၉.၇ လက်မအရွယ် iPad ကို မိတ်ဆက် ♫
♪ ကဏ္ဍအသစ်များဖြည့်စွက်ထားသည့် My Ooredoo App V.2.0 ...
♪ Apple က အထူးထုတ် အနီရောင် iPhone7နဲ့7Plus M...
♪ " ကွန်ပျူတာအသစ်များတွင် Windows7နှင့် 8.1 upda...
♪ " နောက်ဆုံးရဈေးနှုန်းများ " (21.3.2017 ၊ အင်္ဂါနေ့...
♪ " Nokia5VS Nokia6" တို့ရဲ့ နှိုင်းယှဉ်ချက်မျာ...
♪ “Sony က တန်ဖိုးနည်း Xperia L1 ကိုမိတ်ဆက်” ♫
♪ “Xiaomi Mi6ရဲ့ သတင်းအချက်အလက်များအွန်လိုင်းမှာ...
♪ “အူရီဒူးမှ Live chat ဖြင့်လည်း ဆင်းကတ်မှတ်ပုံတင်...
♪ အားသွင်းထားတဲ့ဖုန်းကို ရေချိုးရင်း သုံးမိလို့ ဓာ...
How To Root Locked Bootloader Xiaomi Mi 4s
♪ MacBook Pro ကို ဟက်နိုင်ခဲ့လို့ မြန်မာငွေကျပ် သိ...
♪ သင့် မျက်နှာမှာ အတုအယောင် မိတ်ကပ် လိမ်းခြယ်နိုင်...
♪ iOS ကနေ Android ပြောင်းကိုင်သူများအတွက် အသုံးဝင်...
♪ Sony က mid-range စမတ်ဖုန်းအသစ် Xperia L1 ကို မိတ...